Izinyathelo Ezi-10 Zokwakha Uhlelo Olusebenzayo Lwabasebenzi Bokukhuthaza Umphakathi | Martech Zone
Izinyathelo Ezi-10 Zokwakha Uhlelo Olusebenzayo Lwabasebenzi Bokukhuthaza Umphakathi
ULwesihlanu, July 28, 2017 NgoMgqibelo, ngoFebhuwari 13, 2021 Douglas Karr
Ngenkathi izinkampani ezinkulu zivame ukuba nezabelomali ezinonile futhi zingathenga ukubonakala ezinkundleni zokuxhumana, ngiyamangala ukuthi zingaki izinkampani ezisebenzisa amandla abasebenzi bazo ukusiza. Sibe nengxoxo emnandi ngalokhu no U-Amy Heiss kaDell, abahambe ngemiphumela emangalisayo izinhlangano zabo ebezizuza ngokwakha uhlelo olusebenzayo lokukhuthaza abasebenzi emphakathini.
Njengoba sikhuluma namakhasimende mayelana nokukhuthaza abasebenzi kwezenhlalo, ngivame ukuphinda enye indaba ethi UMark Schaefer kwabelwane mayelana nenkampani yomhlaba wonke enamakhulu ezinkulungwane zabasebenzi. Ngesikhathi beshicilela ezinkundleni zokuxhumana, babenezinto ezimbalwa abazithandayo nabaphindayo. UMark ubuze (echazwe ngamafuphi), "Lapho abasebenzi bakho bengakuthandi ngokwanele ukufunda nokwabelana ngokuqukethwe kwakho, ucabanga ukuthi amathemba akho namakhasimende akubuka kanjani?". Umbuzo oqinile… ukukhuthazwa kwezenhlalakahle zabasebenzi akukhona nje ukwaba, kumayelana nokunakekela.
Ezinye izinhlangano engikhulume nazo ziyanqikaza ukucela usizo lwabasebenzi bazo, ezinye zize zenze nezinqubomgomo ngokumelene it. Kungishiya ngisha engqondweni yami ukuthi inkampani izokhawulela ithalente layo elibiza kakhulu futhi elibiziwe futhi ibavimbe ekwabelaneni ngolwazi lwabo, uthando lwabo, noma imibono yabo. Vele, kukhona okuhlukile ngezimboni ezilawulwa kakhulu, kepha ngikhombise imboni elawulwayo futhi usazothola izinhlelo ezisebenzayo ezisebenza ngaphakathi kwezingqinamba.
Noma kunjalo, ezinye izinkampani zigcwele abasebenzi abazizwa bengenaso isibopho sokusiza ekwenyuseni inkampani. Kulezo zimo, kuzofanele ngibheke ngokujulile isiko lale nkampani nokuthi hlobo luni lwabasebenzi engibaqashayo. Bengingacabangi ukuqasha isisebenzi esasingafuni ukukhuthaza umsebenzi waso. Futhi bengingacabangi ukuba yisisebenzi futhi ngingaqhoshi ngokwanele ukukhuthaza imizamo yeqembu lami.
Abasebenzi manje badlala indima ebaluleke kakhulu emizamweni yenhlangano yokuthengisa okuqukethwe. Ngokuncipha okukhulu kokufinyeleleka kwezinto eziphilayo emithonjeni yezokuxhumana nokwanda okumangazayo kwevolumu yokuqukethwe, umjaho wokuthola ukunakwa kwabantu uncintisana kakhulu kunakuqala futhi abasebenzi sebephenduke izimpahla ezisemqoka njengamanxusa ezimpawu ezethembekayo ezinkundleni zokuxhumana. Eqinisweni, Inkampani enabasebenzi abangama-20 enabantu abangaphezu kuka-200 kunethiwekhi yabo ingaveza kane ukuqwashisa ezinkundleni zokuxhumana.
Kuyini Ukumelwa Komphakathi Kwabasebenzi?
Ukugqugquzelwa kwezenhlalakahle zabasebenzi ukukhuthazwa kwenhlangano ngabasebenzi bayo kumanethiwekhi abo ezokuxhumana.
Mema abasebenzi bakho ukuze bajoyine uhlelo lwakho olusha lokukhuthaza umphakathi ngokuthanda kwakho.
Dala imithombo yezokuxhumana imihlahlandlela futhi kufundiswe abasebenzi ngemikhuba emihle.
Qedela lokubonisa inqubo yethuluzi lokukhuthaza abasebenzi ozolisebenzisa.
Nquma izinhloso zebhizinisi lakho futhi izinkomba zokusebenza kokhiye yohlelo.
Dala ummeli wesisebenzi ithimba ukuphatha imizamo yenkampani yonke nokuqoka umxhumanisi wohlelo.
Qalisa a Uhlelo lokushayela izindiza neqembu elincane labasebenzi ngaphambi kokulidlulisela kuyo yonke inhlangano.
Curate futhi ukuthuthukisa ezihlukahlukene fresh futhi efanele sokuqukethwe ukuze abasebenzi babelane nabalandeli babo.
Thola ukuthi okuqukethwe nokuthunyelwa kwemilayezo kuzoba yini kuvunyelwe kuqala ngumxhumanisi wohlelo.
Ukuqapha ukusebenza kohlelo kanye umvuzo abasebenzi abanezikhuthazo zokuxhaswa kwabo.
Linganisa imbuyiselo ekutshalweni kwemali kwemizamo yakho yokukhuthaza abasebenzi ngokulandela umkhondo ama-KPI athile.
Ukukhombisa ukubaluleka kwaleli su kanye nomthelela, abantu base I-SocialReacher ngithuthukise le infographic, Amandla Wokukhuthaza Abasebenzi Bezenhlalo, okukhombisa ukuthi kuyini, kungani kusebenza, kusebenza kanjani, kanye nemiphumela yayo ezinhlanganweni ezisebenzisa kahle izinhlelo zabasebenzi zokukhuthaza ezokuxhumana nabantu. Qiniseka ukuthi upheqa ukuze ubone ividiyo enhle yokuchaza ivuliwe I-SocialReacher!
I-SocialReacher iyithuluzi lokukhuthaza abasebenzi bezokuxhumana elinika amandla abasebenzi benkampani yakho nabasebenzisana nabo ukuba babe ngabameli bomkhiqizo wakho. Thuthukisa ubukhona bezindaba zenhlalo yenkampani yakho, khulisa ukufinyelela kwayo futhi wakhe ukuthembeka ngokubandakanya iqembu lakho ukuthi labelane futhi lithuthukise okuqukethwe okuyinkampani. Abasebenzi bakho bangabameli bohlobo oluhle kakhulu ongaba nabo. Uma bekholwa, bonke bazolandela.
Tags: ukukhuthazaukuxhaswa kwabasebenziimivuzo yabasebenziukukhuthazwa kwezenhlalakahle zabasebenziizinhlelo zokukhuthaza abasebenzi ezinkundleni zokuxhumanaUhlelo lwemivuzo yomphakathiindlelaungakha kanjani uhlelo lokukhuthazaukukhuthazwa kwezokuxhumana nabantuuthishakuyiniyini ukukhuthazwa kwezenhlalakahle zabasebenzi
I-All-American ne-CEO uJeremy Bloom Uxoxa Ngokuhlanganisa